I-125 YEETATTOOS EZILUNGILEYO ZAMADODA: IIMBONO EZIPHOLILEYO + ZOYILO (ISIKHOKELO SIKA-2021) - IITATTOOS
Eyona Iitattoos I-125 yeeTattoos eziLungileyo zaMadoda
Iitottoo zeNeck ziyaqhubeka ukuba yenye yezona zimvo zibi kakhulu zeetattoo. Ngelixa ii-tatoo zentamo zamadoda zibonakala kakhulu, abafana abajonga ubugcisa babo bomzimba njengotyalo-mali lokugqibela ekuzibonakaliseni bahlala bekhetha uyilo lwentamo epholileyo kuba banesibindi, banemvukelo kwaye bayoyikeka ngokupheleleyo.
Nokuba ucinga ithambo elipheleleyo lentamo okanye icala nje, ngaphambili okanye ngasemva entanyeni yakho, unazo iitatoo zentamo ezilungileyo. Ukusuka kokuncinci kunye nokulula ukuya kokukhulu kunye nemibala, ezi ngcamango zet tattoo ezizodwa ziya kukukhuthaza ukuba uze nento enentsingiselo kwaye iyamangalisa.
MbiniEzona zoyilo zeTatoo zibalaseleyo
Ngeemvakalelo ezininzi ze-tattoo zentamo ezipholileyo kubafana onokukhetha kuzo, kunokuba nzima ukukhetha umsebenzi wobugcisa olungileyo kunye nokuzoba kuwe. Kodwa ngelixa intamo kunye nomqala indawo inokuba ngamabala angaqhelekanga kubugcisa bomzimba, ezi ndawo ngokwenene ziindawo ezithandwa kakhulu kwiindidi ezahlukeneyo zeetattoo zamadoda.
Kuba indawo incinci, ii-tatoo ezincinci zentamo ezinenkwenkwezi, intyatyambo, umhla, wavuka , Intsiba, intliziyo, igama, kunye nesicatshulwa esifutshane sinokulingana kwicala, ngasemva, okanye entanyeni. Ngapha koko, uyilo olulula lwentamo luqhelekile kwaye luyathandeka kuba bapakisha intsingiselo eninzi.
Kwelinye icala, ukuba ufuna i ibadass umvambo wentamo opheleleyo, ungaya kuyilo olugubungela yonke intamo yakho kwaye usonge macala onke. Ezinye izimvo ezithandwayo zetattoo zibandakanya uyilo lwesizwe, amaphiko eengelosi, ukakayi , kunye nezilwanyana ezinje nge Ingcuka , Ingonyama , isigcawu, ukhozi, kunye isikhova .
Okokugqibela, ezinye zeetattoos zentombazana eziyilayo kunye nezintle kakhulu zezolule ngaphaya kwentamo. Kuyenzeka ukuba ufumane itattoo yentamo eyandisela kumqolo ongaphezulu, egxalabeni, kunye isifuba .
Abanye abantu abanomdla bade bahambe baye kufumana umva wetattoo entanyeni eya kufikelela ebusweni nasentloko kunye nokusonga esifubeni esipheleleyo, umva, imigibe, namagxa.
Ukuba usenemincili ngetattoo entanyeni epholileyo, uya kuyithanda le galari yezona ntlobo zintle ze tattoo. Ngelixa kukho ukuthandabuza okuncinci ukuba ii-tatoo zentamo kubafana zithathwa njenge-niche kwaye ngekhe zibekho kwi-tattoo yokuqala oyifumanayo, intambo entle yentambo inokuba yindlela elungileyo yokuzibonakalisa kwakho kwihlabathi.
Jonga icala eliphezulu, ngasemva, ngaphambili nangaphantsi kwetattoos yokuphefumlelwa!
luthini umqondiso wakho welanga
iinwele zamadoda anobuso obungqukuva
Iingcamango ze tattoos zengalo yomphambili
indlela yokucima umlilo